Strategy First University
ICM Single Subject Diploma
Own Business Management
SFU Professional Diploma
SFU Professional Diploma in Marketing and Brand Management
SFU Professional Diploma in Marketing and Sales Management
SFU Professional Diploma in Financial Management
SFU Professional Diploma in Business Management & Entrepreneurship
SFU Professional Diploma in Project Management
SFU Professional Diploma in Human Resources Management and Development
SFU Professional Diploma in Logistics and Supply Chain Management
ICM Single Subject Diploma in Logistics and Supply Chain Management (‌မေလတန်းခွဲ)
Start Date : 21-May-2022
End Date : 20-August-2022
Schedule : ZOOM Discussion Schedule – Saturday (6:00 PM to 8:30 PM)
Class Code : SFU-ICM-LSCM-05-01 (On Campus)
Place : Myaynigone Teaching Center(2) Yangon,
Lecturer : Capt, U Aung Khin Myint - Chairman, Global Multimodal Transport And Services Co. Ltd, Master Mariner (Ministry of Transport), Representative, American President Line (APL) Logistics, EMBA (YIE), Dip in Shipping and Port Mgt, Dip in Mgt & Administration,
ICM Single Subject Diploma in Logistics & Supply Chain Management (Online) မတ်လ တန်းခွဲသစ်အတွက် အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
ICM Single Subject Diploma in Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ?
Logistics Management ဆိုတာ Organization တစ်ခုလုံးနဲ့ မားကတ်တင်း channel တွေရဲ့ မဟာဗျုဟာကျကျ ကုန်ပစ္စည်း များ ဝယ်ယူခြင်း ကစပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်စီးဆင်းမှုနဲ့ ထုတ်ပိုး သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းများကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Supply Chain Management ကတော့ ကုန်ကြမ်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Supplier တွေကစပြီး သုံးစွဲသူတွေဆီရောက်တဲ့အထိ ပါဝင်တဲ့ ကြားခံကွန်ယက် များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Logistics & Supply Chain Management မှာ အခန်းကဏ္ဍ ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း၊ ကုန်ကြမ်းများဆိုင်ရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရတဲ့အပိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ ကုန်ကျစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစတဲ့ အခန်းကဏ္ဍေ တွကိုလေ့လာ ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Logistics & Supply Chain Management ကို ဘယ်သူတွေ တက်သင့်လဲ?
- NGO များတွင် Logistics & Supply Chain ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ၊
- ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊
- Trading၊ export နှင့် import
- Warehousing စ တဲ့ အပိုင်းမှာလုပ်ကိုင်နေသူများ တက်ရောက်သင့်တဲ့ program တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ICM Single Subject Diploma in Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များ -
I. Logistics and the Supply Chain
II. Serving the Customer
III. Value and Logistics Costs
IV. Managing Logistics Internationally
V. Managing the Lead Time Frontier
VI. Just-In-Time and Lean Thinking
VII. The Agile Supply Chain
VIII. Managing the Supply Chain
IX. Partnerships in the Supply Chain
X. Logistics Future Challenge စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“သင်ခန်းစာများကို Online သီးသန့်ဖြင့် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။”
၁။ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများမှကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသော သင်ခန်းစာဗီဒီယိုများကို Website/ Moodle application တွင် လေ့လာရမည်။
၂။ ကြိုတင်လေ့လာပြီးသော ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကို လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် Face to Face workshop အတန်းချိန်များကိုတော့ သတ်မှတ်ထားသည့်အတန်းချိန်အတိုင်း Online မှ Zoom application ဖြင့်အပတ်စဉ် တစ်ပတ်(၁)ရက် တက်ရောက်ပေးရပါမည်။
*သင်တန်းကြေးများကို (၂)ကြိမ် အရစ်ကျခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။
*သင်တန်းကြေးကို အထူးအဆင်ပြေသော Online ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့်
• Wave Money
• KBZ Pay
• AYA Pay
• Mobile Banking (AYA, KBZ, CB, Yoma) များဖြင့် လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
* ငွေပေးချေပြီးသော Screenshot ကို Strategy First University Facebook Page Messenger သို့ပေးပို့ရပါမည်။
* Payment Screenshot လက်ခံရရှိပြီးပါကသင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသေးစိတ် ပြန်လည်ပို့ပေးသွားပါမည်။
09-250717166 သို့လည်း ဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
* မူရင်းသင်တန်းကြေး - ၃၉၅,၀၀၀ ကျပ်
* ယခု Online သင်တန်းကြေး - ၂၄၅,၀၀၀ ကျပ်
* Old Student Discount - ၂၀၀၀၀ ကျပ် (Save)
* Referral Discount - ၁၀၀၀၀ ကျပ် (Save)
*SFUx Certificate in Logistics and Supply Chain Management ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ICM Logistics and Supply Chain Management အတန်းကို တက်ရောက်ပါက SFUx မှ certificate ဘာသာရပ်တစ်ခုကို Discount ရရှိပါမည်။
No.9A, Baho Road, Sanchaung Township, Yangon.
Yangon Teaching Centre 1
No.239, Pyay Road, Near Myaynigone CityMart, Sanchaung Township, Yangon.
Yangon Teaching Centre 2
No.237, UWisara Road, SanChaung Township, Yangon.
Yangon Teaching Centre 3
No.142, 146, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
Mandalay Teaching Centre
Block 4, Unit 8, Mingalar Mandalay, 73rd Road, Corner Thazin and Ngu Shwe War Road, Mandalay.